Izicelo Eziyinhloko: Amafutha, amakhandlela, ukhilimu. Ngenxa yendawo yokuncibilika ephakeme kanye nobubanzi obuningi bokuncibilika kwamanzi, isetshenziswa yodwa noma ihlanganiswe namanye ama-solvent, i-polyethylene glycol 1000-4000 ingasiza ukufeza ibanga lokuncibilika lapho isikhathi nendawo yokonga kuhambisana nezidingo zemithi futhi imiphumela yomzimba. Ukucasuka okuvela esikhwameni se-PEG matrix kuncane kunalokho okusuka kumatrix kawoyela wendabuko. Ukupakisha Indlela: 50kg plastic sigubhu Quality Standard: CP2015 Shelf Life: Thre ...
Izicelo Eziyinhloko: Amafutha, amakhandlela, ukhilimu. Ingxube efanelekile ye-polyethylene glycol inokuhambisana okuthile kokunamathisela (okufana nenhlanganisela ye-PEG300 ne-PEG1500 ngenani elilinganayo), lezi zakhiwo zibenza bathokozele ukuncibilika kwamanzi okungcono nokuhambisana okuhle nezinye izidakamizwa, ngakho-ke ingasetshenziswa njenge-substrate Amafutha . Ukupakisha Indlela: 50kg plastic isigubhu Quality Standard: CP2015 Shelf Life: Iminyaka emithathu Isitoreji Ezokuthutha: Lo mkhiqizo non-enobuthi, ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi, njengoba g ...
Izicelo Eziyinhloko: Isisindo samangqamuzana sePolyethylene glycol 600 sikhulu kunaleso sePolyethylene glycol 400 ngenkathi ukuncibilika okukhulu emanzini kuncane ngokuqhathanisa phakathi kwabo. I-polyethylene glycol 400 iwuketshezi futhi inokuhambisana okubanzi nama-solvents ahlukahlukene, ngakho-ke iyisixazululo esihle ne-solubilizer futhi isetshenziswa kakhulu kumalungiselelo oketshezi, njengesisombululo somlomo, amaconsi wamehlo njalonjalo. Lapho uwoyela wemifino ungasifanele isithako sokubamba esisebenza ngokubambisana, ...
I-Polyethylene Glyeol 400
Izicelo Eziyinhloko: I-Polyethylene glycol 400 ifanele ukulungiselela i-capsule ethambile kakhulu. I-polyethylene glycol 400 iwuketshezi futhi inokuhambisana okubanzi nama-solvents ahlukahlukene, ngakho-ke iyisixazululo esihle ne-solubilizer futhi isetshenziswa kakhulu kumalungiselelo oketshezi, njengesisombululo somlomo, amaconsi wamehlo njalonjalo. Lapho uwoyela wemifino ungasifanele isithako sokubamba esisebenza ngokubambisana, i-polyethylene glycol yinto efakwa esikhundleni sayo ngoba i-polyethylene glycol isitebhisi ...